Raveloaritiana Mamisoa · Oktobra 2018 · Global Voices teny Malagasy
Raveloaritiana Mamisoa · Oktobra, 2018
Nanomboka nandika tamin'ny 22 Febroary 2011 · 2937 Lahatsoratra
Lahatsoratra farany an'i Raveloaritiana Mamisoa tamin'ny Oktobra, 2018
Ako avy amin'ny tontolon'ny bilaogy Toniziana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 31 Oktobra 2018
Malaza tamin'ny lohahevitra samihafa toy ny mahazatra ny tontolon'ny bilaogy Toniziana, manomboka amin'ny tena matotra hatramin'ny mazavazava kokoa, topi-maso momba ireo lohahevitra mahaliana sasany noresahana nandritra ny 2 herinandro lasa ireto manaraka ireto
Tantara antserasera momba ny fialan'ireo Venezoeliana ny fireneny
Amerika Latina 30 Oktobra 2018
Azo arahana amin'ny alalan'ny tantara sy toro-hevitra avy amin'ireo izay efa nandao ny firenena ny fahasoratana amin'ny fialàna ao Venezoela mankany amin'ny firenen-kafa.
Mampiseho ireo mpikatroka tamin'ny Hetsika Elo sy ilay mpanao sariitatra ara-politika Badiucao ny Herinandron'ny Fahalalaham-pitenenana ao Hong Kong
Azia Atsinanana 27 Oktobra 2018
Tato anatin'ny taona vitsy, niatrika famoretana henjana ireo Hong Kongers manohana ny zo demokratika sy ny fahaleovantenan'ny faritra.
Mampisahana ny fampiharana lalàna any amin'ny orinasa tsy miankina iray tsy manaja ny zon'olombelona i Okraina
Eoropa Afovoany & Atsinanana 27 Oktobra 2018
Raha ara-teknika, dia tsy mpitandro filaminana ara-panjakana izy ireo. Mifototra amin'ny fifanarahana nosoniavina teo amin'izy ireo sy ny tanàna ihany ny fe-potoam-piasan'izy ireo - izay miovaova be isaky ny tanàna - ary tsy misy mihitsy ny rafitra momba ny fandraisana andraikitra.
Fampahafantarana ny bilaogy ao Zaghouan, Tonizia
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 26 Oktobra 2018
Tamin'ny fihaonan'ny bilaogera Toniziana isam-bolana, iray amin'ireo lohahevitra miseho hatrany ny hoe inona no azontsika atao mba hanapariahana bebe kokoa ny bilaogy any Tonizia ary hahazo olona maro manoratra sy mizara anaty aterineto.
Ny hevitr'i Frederick Noronha amin'ny fankatoavana bilaogera ao India
Azia Atsimo 26 Oktobra 2018
Nizara lahatsoratra tamintsika momba ny tombatombana ilay mpanao gazety indiana Frederick Noronha fa mety hanomboka hankatoa ireo bilaogera ny governemanta Indiana.
Sarintany ifarimbonana lasa fitaovana hiadiana amin'ny heloka bevava ao Meksika
Amerika Latina 26 Oktobra 2018
Ny fiaraha-miasa toy ny fampiasana fitaovana fandraketana an-tsaritany iombonana dia maneho ny toe-javatra iainan'ny olom-pirenena amin'ny olana ara-piarovana. Ireo fitaovan'ny olom-pirenena ireo dia vahaolana mahasoa manoloana ny olana.
Manampahefana Serba manasazy fikambanana mpanao asa soa ara-pahasalamana noho ny nampisehoany ny tsy firaharahian'ny fanjakana
Eoropa Afovoany & Atsinanana 24 Oktobra 2018
Manao famotorana orina mpanasoa eo amin'ny sehatry ny fahasalamana ny manampahefana misahana ny fampiharana ny lalàna ao Serbia, mpitsikera ampahibemaso ny fitondrana ny tompon'ny fikambanana ka mahatonga ny olom-pirenena sasany hilaza fa valifaty no anton'ny famotorana.
Baolina fandaka sy fitsarana ny media ao amin'ny bilaogy Maraokana
Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana 24 Oktobra 2018
Yennayer ny 12 janoary, taona vaovao Amazigh. Noho izany dia atomboko amin'ny firariana tratry ny Yenayer 2956 ho an'ireo Amazighs manerantany!
Nandefa kasikety ‘Make Wall Great Again’ ilay Shinoa mpanakanto Badiucao, ho fanoherana ny fiverenan'ny orinasa Google ao Shina
Amerika Avaratra 24 Oktobra 2018
"Tiako hahafantatra ny [Google] fa fahadisoana ny miara-miasa amin'ny sivana ao Shina. Mahamenatra toy ny rindrin'i Trump izany, fa amin'ity indray mitoraka ity dia rindrina tsy hita maso anaty aterineto - ny aroafo lehibe."